Fanoherana · Febroary, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Fanoherana · Febroary, 2010
Tantara mikasika ny Fanoherana tamin'ny Febroary, 2010
Iràna 16 Febroary 2010
Nanomana fihetsiketsehana ny mpanohitra avy ao amin'ny Hetsika Maitso tamin'ny tanàna maro manerana an'i Iran nandritra ny fankalazana ny revolisiona Iraniana tamin'ny 11 febroary saingy Tsy nahavory olona maro tahaka ny taloha intsony noho ny asan'ny mpitandro ny filaminana sy ny Fihaonana maro sy lehibe ataon'ny mpanohana ny fitondrana. Mbola nifampihaika...
Egipta: Ny zo hiteny
Ejipta 09 Febroary 2010
Nanao famelabelaran-kevitra ireo mpitoraka blaogy sy mafana fo Egiptiana tamin'ny 22 Janoary mba hiarovana ny zon'izy ireo miteny taorian'ny nisamborana mpitoraka blaogy 20 mahery raha tonga tao amin'ny tanànan'ny Naga Hammady, izay nisian'ny famonoana ireo Coptic, ny fiarandàlamby nitondra azy ireo. Mitaitra ny hevitr'izy ireo momba ny fitànana azy ireo i Marwa Rakha ato amin'ity lahatsoratra ity.
Iran: Feon-kira Maitso hanohanana ny Hetsika Fanoherana
Iràna 03 Febroary 2010
Feon-kira iray ho an'ny finday izay mampirisika ireo tanora Iraniana handeha any amin'ny vava ady sy hitolona nandritra ny ady teo amin'ny Iran sy Iraka tamin'ny 1980 dia miverina indray ankehitriny ho firaisan-kina amin'ny fanoherana. Mitantara ny fihetsik'ireo mpitoraka blaogy momba io hira 'Ey Iran' io i Hamid Tehrani.
Iran: Mpitoraka blaogy roa ahiana hovonoina ho faty
Iràna 02 Febroary 2010
Any ambadiky ny "barreaux" noho ny fanamelohana mavesatra ireo mpitoraka blaogy Iraniana roa, izay mpiaro koa ny zon'olombelona. Mehrdad Rahimi sy Kouhyar Goudarzi dia voaheloka ho niantsy “ady tamin'Andriamanitra,” ary voatondro ho “Mohareb” (fahavalon'Andriamanitra). Mitovy ny nanamelohana ireo lehilahy roa novonoina tany Tehran tamin'ity herinandro ity ny nanamelohana azy ireo.